Thanda okokuqala ukuba nenze ubulili? Amathiphu, imithetho kanye nemihlahlandlela
Scary Ingabe okokuqala ukuba nenze ubulili? Labo ubungekona embhedeni omunye umuntu kungenzeka ukuphendula ngoyebo. Phela, iningi izinsizwa nezintombi kuyabethusa kakhulu ukusondelana kuqala. Futhi isizathu salokhu ukungalethembi amakhono abo futhi ngenxa yokungabikhona kolwazi. Kodwa uma umuntu balahle zombili lezi zici, embhedeni bakwazi ukugwema ukuphoxeka edabukisayo.
Ngakho ake sixoxe omagazini bamuva ezithinta ubuhlobo obuseduze of imibhangqwana esemisha. Sifunda: indlela ocansini okokuqala? Lapho futhi kubani ukunikeza zobuntombi babo? Futhi ngemiphumela uthando budedengu?
Ngasiphi yobudala kumele kuqale ngobuhlobo bobulili?
Lo mbuzo lubalulekile kakhulu namuhla. Imininingwane okuxekethile kuye kwaholela yokuthi ngisho abafundi baye baba nesithakazelo indlela okokuqala ukuba ocansini. Ngaphezu kwalokho, ezinye zazo zinokungabaza ukuthatha lesi sinyathelo ngaphambi kokufinyelela eminyakeni ewu 14 nokuthi ngezinye izikhathi kuholela imiphumela engemihle.
Ngakho asiqale amaqiniso olusemthethweni futhi imibono lochwepheshe. Kuyaziwa ukuthi odokotela batusa ukuqala ucansi eyaziwa lungekho ngaphambi kweminyaka engu-15. Phela, intsha ngaphezulu ucansi ungakulimaza impilo entsheni, ikakhulukazi uma kuziwa amantombazane. Ngakho-ke, uma sicabangela isihloko kusuka iphuzu bokuphila buka, ukuqala ubuhlobo bobulili kangcono emva kweminyaka 16-17.
Uma sikhuluma isici ngokwengqondo sendaba, njengoba kusekhona kudida okuningi. Ngokuqinisekile into eyodwa kuphela: usemncane kakhulu, nakho esingaqondile esingase phakade ukushintsha isimo sengqondo somuntu sengqondo ngobulili. Ngakho-ke, odokotela bengqondo belulekwa ukuba uqale ukucabanga nendlela ngokokuqala ukuze ocansini kuze ngemva kwabo lokuzalwa 16.
Ngokwemvelo, kungcono ukuze uthole okuhlangenwe nakho kwakhe kuqala ngokwezocansi nomuntu omthandayo ngayo yonke inhliziyo yakho. Phela, indlela kuphela ungaqiniseka ukuthi yonke inqubo lovemaking kuhambe kahle futhi ukuqeda lapho ufuna khona.
Kulokhu, elikhulu ubhekwa isimo lapho omunye umlingani kakade anezinye isipiliyoni ubuhlobo obuseduze nabanye. Ngenxa yalokhu, uzokwazi nokuxhumanisa ukunyakaza yakho, uma kudingeka, ukunikeza izeluleko. Futhi uma abaqondi into, ungesabi ukubuza imibuzo, ngoba kuthinta impumelelo umcimbi.
Kodwa kuthiwani uma bobabili ophathina awunalwazi olutheni futhi bedidekile ngokuthi indlela ocansini okokuqala? ITHOLAKALA KUPHI I-amathiphu ezidingekayo futhi ningaweli ubuso ebhuqwini?
Uma abazali azitshelwanga ngocansi?
Maye, ke ngakho kwenzeka ukuthi namuhla, abadala akuvamile bakhulume nezingane zabo mayelana nendlela ocansini okokuqala. Ngokuvamile, uyakwazi ukuwaqonda, ngoba ngezihloko ezifana zizizwe othi awube bengakhululeki nentsha ingafaneleki. Ngokuphathelene kukharikhulamu, kuphela ezinkulumweni olujwayelekile mayelana ukusondelana ngakho kushiya okuningi amnyama.
Ikhambi ekahle bebuyoba ukukhanya amafilimu zangasese. Ngemva kokubukeza amateyipu ambalwa esinjalo, ungakwazi ukuqonda indlela sexual senzeka. Ngesikhathi esifanayo, ngokungafani kuya izihloko kanye nezincwadi konke ukuboniswa imidwebo, okuyinto kusiza inqubo Ukuqaphela. Nokho, lokhu akusho ukuthi kufanele kungagcini kuphela amafilimu zangasese. Ngaphandle kwalezi, kukhona namanje izihloko eziningi ewusizo nezincwadi ezingaba ecacile ukuchaza ngokokuqala ukuze ocansini.
Uma kukhona ukungabaza kuthiwa kungaqedwa, ihlala yodwa ukukhetha indawo lapho kwenzeka. Vele ufuna ucacise ngephuzu elilodwa: Abantu-ke akudingekile ukuba izitike ngenjabulo yokubonisana uthando noma kuphi, futhi nakakhulu lapho udonga othile lapho. Isikhathi sokuqala ekhethekile ke kubalulekile ukuba silungiselele kahle.
Lokhu arcade kwenziwa kuphela, ukuze kungabikho muntu ziphazamise ukuthula kwakho. Ngakho-ke Khuluma nge izindawo zakho kungenzeka umlingani kanye ukhethe best. Kubalulekile futhi kakhulu ukuthi ubulili sokuqala senzeke embhedeni noma kusofa. Njengoba ifenisha ezinjalo ukuze uphumule futhi shí inqubo.
Zothando umkhathi futhi iyingxenye ebalulekile lesi senzo. Okokuqala, kuyasiza ukuba yavusa, kanti okwesibili, ngoba izinkumbulo zakhe bokwenza ucansi kuqala kuyoba imilingo kuthakaseleke. Futhi, udinga sokulungiselela kusengaphambili indlela zokuvimbela inzalo, kungenjalo kukhona amathuba eqinile ukuthi ubuhlobo bobulili kuzophela ukukhulelwa.
Indlela ocansini okokuqala?
Lapho wonke amazwi eshiyiwe, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba senzo. Ngakho lapho ingabe ngidinga ukuqala? Ngakho, qale uye foreplay: ukuqabulana, kuwukuziphulula, ukububula mnene futhi cuddles. Kunzima ukusho isikhathi esingakanani ukuba abagcine, ngoba pair ngamunye ngokuphelele izibalo ezahlukene. Into esemqoka ukuthi kokubili abalingani sijabulile futhi le ntombazane iqala ukuya ivelele Lubrication lwesitho sangasese sowesifazane.
Thanda okokuqala ukuba nenze ubulili? Kanjani ukuqala inqubo? Impendulo isobala: ngokunakekela nokunyakaza mnene, njenganoma yikuphi isinyathelo esinqala angabangela ubuhlungu obukhulu ngisho ona le ntombazane. Ngakho guys babe eduze nokuqapha isimo, izintokazi, ukuthi ubulili yabajabulisa kokubili abalingani. Ngeshwa, ngokungafani abesifazane amadoda akuvamile orgasm at ocansini okokuqala. Ngakho musa singalazisa amathemba amakhulu kulesi sici, ikakhulukazi nomlingani, a Rookie.
Ngemva socansi iphelile, musa ngokushesha wagqoka, noma ukusebenzisa yokugezela. Cwilisa kancane ndawonye, khuluma futhi ujabulele ubunqunu nomunye. Phela, injabulo kuletha ucansi nje kuphela, kodwa ukusondela okulula imiphefumulo emibili.
ubulili namantombazane Okokuqala
Maye, abesifazane ubuhlungu ocansini okokuqala. Lokhu kungenxa yokuthi phakathi bezoziphatha bona iphula le hymen. Ngaphezu kwalokho, kungase kuholele iqiniso lokuthi intombazane uqale olungaphelele ezophayo. Kodwa ungesabi, kuba impela ezivamile. The main zangaphambi wabantu ngaphansi ithawula ukuze bayiqede ngesikhathi hhayi enhlabathini embhedeni.
Futhi khumbula, owesifazane savusa, ngcono ngoba ucansi naye. Ngenxa yalokho, amantombazane, ungavumeli umlingani wakho ukuqala ubuhlobo bobulili, inqobo nje hhayi ngokuphelele uphumule. Lokhu kuzosiza ekunciphiseni izinhlungu ngisho ngokuphelele ukuhlukana nawe zazo.
Izinzuzo zocansi kwabesifazane
Indlela efanele ukuya ocansini
Androgyny - izimpawu esitezi sesithathu? Ngobani androgynous futhi yini eyenza kubo kusukela ukuphumula?
Ubude besikhathi sokuya
Kanjani ukuze ajabulise indoda: indlwana kwabesifazane
Kungani abantu begxile ubulili namuhla?
Umuthi 'Dihydroquercetin ": ukubuyekezwa, imiyalelo, intengo, imiphumela isicelo
Baubles ka Floss Wabasaqalayo - hhayi njengoba kunzima njengoba kubonakala!
Singers 80 uhlu isiRashiya, futhi ekuhlaziyeni lokusungula
Izicathulo Black inkantolo: kanjani ukuba ukhethe futhi yini okufanele uyigqoke
UMarilyn Monroe ngaphandle kokwenziwe: yini eyayifihliwe ngemuva kwenkanyezi
Indlela yokwenza ikamelo imfihlo "Maynkraft" - ukufunda design
Fine izimpawu zendawo French e Cannes ukuthi bayakufanelekela bebona!
Wamafutha "Oksikort": imfundo, analogs kanye nokubuyekeza
Edmond Hamilton. Umlobi nangemisebenzi yakhe
Ungabiza kanjani iqembu elithi "Vkontakte"?
Kiev yezokuhwebelana kanye Economic University. Kiev amanyuvesi
Toast kuya weminyaka le ndoda. eminyakeni engu-60 - engu engcono!